Ikhasi lasekhaya - World Tourism Portal
ukusiza umhloli ukuba aqhubeke
Amadili amasha kumathikithi endiza
Thola amadili akho manje
Amadili amasha kumahhotela
Thola amathikithi akho eminyuziyamu, imisebenzi, amapaki wezingqikithi nokuningi
Bukela Izeluleko Zethu Zokuhamba Ngevidiyo
Chofoza kunoma yiliphi izwekazi olithandayo futhi ubuke amavidiyo ethu ngezwe ngalinye
Enyakatho naseNingizimu Melika
Qiniseka ukuthi ufunda lezi zeluleko zokuhamba ngaphambi kokuhamba.
Ukuhamba kugcwele izinqumo ezinkulu - njengokuthi ngivakashelwa yiliphi izwe, ukuthi uzosebenzisa malini nokuthi uzoyeka nini ukulinda bese ekugcineni wenze leso sinqumo esibaluleke kakhulu sokuthatha amathikithi.
Nawa amanye amathiphu alula wokuthoba indlela eholidini lakho elilandelayo. Kepha ngale kwesithombe esikhulu, yizinto ezincane ezingenza uhambo lube lula futhi lungabi nzima kakhulu ...
Umhlaba Trivia nsuku zonke
Lokhu ikhasi liyindawo yokugcina yomlando mayelana nezezimanga kodwa iyiqiniso inhlebo mayelana nezindawo emhlabeni jikelele.
Izaziso Zokuvakasha Nezexwayiso
Hlola leli khasi njalo ukuthola izexwayiso nezixwayiso ezithinta ukuhamba. Thola izibuyekezo zakamuva zomhlaba wonke ngodlame lwasemakhaya, izinhlekelele zemvelo nokuqubuka kwezifo.
Kwenzekeni ngalolu suku - Imicimbi yomlando
Funda amaqiniso nezehlakalo ezenzeka nsuku zonke zonyaka.
Imicimbi yamanje neyizayo
Umsebenzi wethu ukusiza owamhloli ukuba aqhubeke futhi.
Kalula, ngokushesha futhi kuphephile.
Ngalesi sizathu sihlala sizama ukuthuthuka nezinsizakalo zethu futhi uthuthukise okusha ukuze ukwazi ukucwaninga ngendawo bese ubhuka iphakheji ephelele yohambo lwakho ngaphandle kokubheka imininingwane noma insizakalo kunoma amanye amasayithi.
Chofoza lapha ukuze ufunde ukuthi kungani abantu besithanda…